पर्वत । फलेवास नगरपालिकाले सबै वडालाई नगरको केन्द्र खानीगाउँसम्म जोड्ने गरी चक्रपथ बनाउन शुरू गरेको छ । नगरपालिकाले भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र आवश्यक ठाउँमा नयाँ ट्र्याक खोलेर नगरपालिकालाई चक्रपथले जोड्ने गरी काम थालेको हो ।नगरपालिकाले सडकको अवस्...
नेविसंघद्धारा फलफुल वितरण
रोशन तिवारी फागुन ७ पर्वत । ६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेविसंघले अस्पतालका विरामी र कारागारका वन्दिहरुलाई फलफुल वितरण गरेको छ । गुप्तेश्वर वहुमुखी क्याम्पस ईकाई समितिको आयोजनामा विरामी र कैदीवन्दिलाई फलफुल वाँडिएको हो । अस्पतालमा भर्ना भएका...
मोदीखोलामा घोप्टो परेको लाश भेटियो
रोशन तिवारी फागुन ६ पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ८ चुवा स्थित तल्लो मोदी हाईड्रोपावर भन्दा तल मोदीखोलाको छेउमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अन्दाजी ४०÷४५ बर्षको युवकको लास फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । मृत लास घोप्टो अवस्थामा तैरिए...
रोशन तिवारी पर्वत ६ फागुन । पर्वतको कुश्मावजारमा एक आइसक्रिम उद्योगमा चोरी भएको छ । गएराती अज्ञात समूहले सदरमुकाम कुश्मावजारको साझाचोकमा रहेको पर्वत आइसक्रिम उद्योगमा चोरी गरेको हो । उद्योगका सञ्चालक जयनाथ मुखियाका अनुसार चोरहरुले उद्योगमा रहेको नगद...
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय पर्वतको भवन निर्माण
रोशन तिवारी फागुन ६ पर्वत । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय पर्वतको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पर्वतको कुश्मा बडागाउँमा निर्माण गरिएको भवनको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिपराज रेग्मीले उद्घाटन गर्नुभएको हो । १ करोड १६ लाख लागतमा भवन निर्माण...
जोखिम मोल्दै साँघुवाट खोलो तर्दै
रोशन तिवारी फागुन ४ पर्वत । बषौँदेखि साँघुरो र जोखिमयुक्त साँघुवाटै स्थानीय आउजाउ गर्छन । स्कुले वालवालिका पनि यहिवाट हातखुट्टा टेकेर विद्यालय पुग्ने गरेका छन् । घाँसपात ओसार्न पनि उस्तै असहज अवस्था रहेको छ । हिउँदमा खोलो सुक्दा खोलामै पसेर तर्...
हार्दिक वधाई तथा शुभकामना .
पर्वत सेवा समाज युके वेलायतले भर्खर नेपालमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा निर्वाचनवाट पर्वतको नेतृत्व गर्दै प्रत्यक्ष विजयी तथा समानुपातिक रुपमा चयन हुनुभएका साँसदहरुलाई वधाई दिएको छ । समृद्ध जिल्ला निर्माणमा जिल्लाका जनप्रतिन...
प्रदेश नम्बर ४ को सभामुखमा अधिकारी निर्वाचित
प्रदेश न ४ को सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेता नेत्रनाथ अधिकारी निर्वाचित भएका छन। बिहिबार बसेको संसदको दोश्रो बैठकले उनलाई सर्वसहमतिको आधारमा सभामुखमा निर्विरोध चयन गरेको हो।अधिकारी वाम गठबन्धनबाट सभामुख भएका हुन्। उनलाई माओवादी संसदीय दलका नेता हरिब...
कता हरायो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग ?
फागुन २ पर्वत । कुश्मा १ मालढुङ्गाका भिमबहादुर माझी कुनैबेला फुरुङ्ङ थिए । आफैले बनाएको छाप्राको समेत लालपुर्जा नभएका उनलाई २०७१ असोजमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १२ आना जग्गा निःशुल्क दिन्छ भन्ने बुझेपछि सदरमुकामस्थीत कार्यालयमा आफ्नो पारिवारिक...
सवारी चेक जाँचमा उल्लेख्य तिब्रता
फागुन २ पर्वत । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले सवारी चेक जाँचमा उल्लेख्य तिब्रता दिएको छ । हाईवे र बजार क्षेत्रभित्र समानान्तर रुपमा चेकजाँच गरिरहेका कारण कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनहरुको संख्यामा निकै बृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव न...